Obi ụtọ na Buda Castle | Akụkọ Njem
Nwee obi ụtọ na Buda Castle
Susana Garcia | | Budapest, General, Hungary
La gaa na obodo Budapest Ọ gụnyere iwu gafere ịgagharị Buda Castle, makwaara dị ka Buda Obí ma ọ bụ Royal Castle. Ezigbo ụlọ a gbagoro n’elu obodo nwere akụkọ ihe mere eme ya ma wuru ya na narị afọ nke XNUMX ma wughachi ya na narị afọ nke XNUMX.
Ka anyị lee nkọwa niile gbasara castlọ a na nkuku ya, na ihe niile anyị kwesịrị ịma tupu ị gaa ileta ya. Anyị ga-echetakwa ụfọdụ isi obodo Budapest, bụ nke anaghị elekwasị anya na nnukwu ụlọ ya.
1 Akụkọ banyere Buda Castle
2 Otu esi aga ulo uka
3 Nleta na Castle
4 Buddha maze
5 Mpaghara Buda
Akụkọ banyere Buda Castle
Ebe obodo Budapest guzo ugbua, enwere uzo ndi Rom ma emesia ndi Hun, Avars na ndi Hungaria biri ya. Nchịkọta nke Buda n'akụkụ Danube na-eto eto na mkpa, ihe kpatara eji wuo ụlọ ndị eze. Ugbu a nnukwu ụlọ malitere iwu na narị afọ nke XNUMX na ugwu, na mbubreyo Gothic style. Mgbe e mesịrị, e wughachiri ya na narị afọ nke 1987 na mbubreyo Baroque ịke. N'oge nnọchibido nke Budapest na Agha Worldwa nke Abụọ, ụlọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe, nke dugara na nwughari ohuru, n'oge a na ụdị neoclassical. N’afọ XNUMX, nnukwu ụlọ ahụ ghọrọ akụkụ nke UNESCO World Heritage Site.
Otu esi aga ulo uka
Iji rute ebe ahụ, anyị nwere ọ dị mfe, ọkachasị ebe enwere ike ịhụ ụlọ a site n'ọtụtụ isi, ebe ọ dị n'elu ugwu nke na-achị obodo ahụ. Naanị ị ga-agafe Osimiri Chain a ma ama ma gbagoo na mkpọda nke na-amalite n'akụkụ ọwara ahụ. Ọ bụrụ na anyị achọghị ime njem ụkwụ n'ihi na enwere ịrịgo, anyị kpoo nnukwu funicular. Ọ kachasị mma ịzụta tiketi njem njem na egwuregwu, ebe ọ bụ ọnụ ahịa ka mma.
Nleta na Castle
Ugbu a nnukwu ụlọ ụlọ ụfọdụ oru na n'oge nleta ị pụrụ ịhụ ụfọdụ n'ime ha. Na Budapest Museum Museum Ọ dị n’ime nnukwu ụlọ ahụ, ọ na-akọkwa akụkọ ihe mere eme n’obodo ahụ site n’etiti oge a ruo ugbu a. Lọ ihe ngosi nka nwere okpukpu anọ ma nwee ihe si na ndụ kwa ụbọchị site na oge dị iche iche. Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke ụlọ ngosi ihe nka bụ okpuru ulo.
La Osisi National Hungary ọ dịkwa n’ime nnukwu ụlọ ahụ. N'ime ya ị nwere ike ịhụ ọrụ dị iche iche nke nka Hungarian site na Middle Ages ruo ugbu a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ngosi ihe nka dum ka etinyebere na eserese, mana ọ ga-ekwe omume ịhụ ụfọdụ ihe osise na ebe ịchụàjà site na oge Gothic.
Ọzọ nke nleta a ga-eme na nnukwu ụlọ bụ ka Széchenyi National Library. Ekwesịrị ikwu na ọbịbịa ọbá akwụkwọ ahụ tupu oge eruo site na ekwentị, ọ bụ ezie na ọ dị mma na nnabata bụ n'efu.
Labyrinth nke Buddha anọghị n'okpuru nnukwu ụlọ, mana ọ dị nso na Bastion na Chọọchị San Matías. Maze a bu network nke ọgba na eke tunnels nke emere site na mmiri mmiri kemgbe ọtụtụ narị afọ. N'ime ha ị nwere ike ịnụ ụtọ njem nlegharị anya, ihe omume na ọbụlagodi kọfị. Nwere ike ịga karịa kilomita na veranda ya. Enwere ike ịhọrọ njem nlegharị anya n'ozuzu mana ị nwekwara ike ịme nleta naanị gị ma ọ bụ abụọ, yana njem pụrụ iche.
Na weebụ ị nwere ike ịmụta ihe banyere akụkọ ihe mere eme nke ọgba ndị a. A na-ekwu na ha bụ ebe mgbaba nakwa na enwere ike iji ha mee ọrụ nzuzo ma ọ bụ ụzọ mgbapụ. Na mpaghara Ylọ Label Prehistoric enwere eserese ọgba. Na Labyrinth Historical enwere ihe nkiri site na akụkọ ntolite nke Budapest. N’olulu a na-akpọ Axis of the World enwere uzo nghazi iji nwee ike ịgagharị n’ime ọgba n’enweghị onye ndu. Mgbe ụfọdụ ọ ga-ekwe omume ileta n'abalị.
Ọ bụghị naanị na nnukwu ụlọ na labyrinth bụ ihe nleta na obodo. Mpaghara Buda nwere isi ihe ole na ole ndị ọzọ nwere mmasị. Na chọọchị nke San Matías Ọ bụ ebe a ka ndị eze Hungary kpuru okpu. Ọta nke Eze Matías so n'ime akụ ndị a na-ezobe akụ ha.
El Basis nke Onye Ọkụ azụ Ọ bụ ihe ọzọ na nke dị nso na nnukwu ụlọ na ihe dị oké mkpa nleta na obodo. Ọ dị n'azụ ụka San Matías ma dị nso na ahịa ndị ọkụ azụ, yana Guild Fishermen na-ahụ maka ichebe mpaghara obodo a, ya mere o nwere aha a. Isi ihe ndị ọzọ a pụrụ ịhụ bụ ụlọ ekpere ndị Juu nke narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ Towerlọ Elu nke Meri Magdalin.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Nwee obi ụtọ na Buda Castle